Maalinta: Oktoobar 29, 2017
Iiraan, baabuurtu ma awoodi kari waayeen in ay ku dhuftaan taraamka
Kusoo Wareegsan kari waayey Izmir, Gaarigii wuxuu ku dhacay taraamka. In kasta oo shilkaas la diley ama lagu dhaawacay, waxaa jiray waxyeelo soo gaartay taraamka iyo gaariga. Si loo yareeyo isu socodka magaalada Magaalada Izmir [More ...]
29 Bishan Munaasabada Happy Birth! Nice 94 Yıl
Wuxuu ku xasuustaa shahiidnimada iyo halyeeyadii daa'imka ahaa Mustafa Kemal Atatürk, Mehmetçik, oo xanuunkiisu aad u cusub yahay qalbiyadeenna, mahadnaq weligiis iyo naxariis leh. [More ...]
Maanta taariikhda: 29 Oktoobar 2016 Capital Waqooyiga Gaadiidka Xawaaraha Sare
Maanta ee Taariikhda 29 Oktoobar 1919 Dowladaha Isbahaysiga waxay sare u qaadday gadiidka militariga ee rasmiga ah. 15 Janawari-15 Abril 1920 boqolkiiba 50 boqolkiiba, 16 Abriil - Boqolkiiba 30 1920 ayaa kordhay intii u dhaxeysay taariikhihii Abriil 400. this [More ...]